युगसम्बाद साप्ताहिक - सभामुखमा डा. तुम्वाहाम्फे कसरी अयोग्य ?
Sunday, 04.05.2020, 03:19pm (GMT+5.5) Home Contact
सभामुखमा डा. तुम्वाहाम्फे कसरी अयोग्य ?
काठमाडौं । कृष्णबहादुर महरा बलात्कार प्रयासको अभियोग लागेर सभामुखबाट राजीनामा दिएपछि अहिले सभामुखका लागि सत्तारुढ दलभित्र चर्को बहस छ । संविधान अनुसार सभामुख र उपसभामुख एउटै दल र लिंगको हुन नहुने प्रावधान छ । यस अनुसार तत्कालीन माओवादीबाट महरा सभामुख र एमालेबाट डा. शिवमाया तुम्बाहाङफे चयन हुनुभयो । दुई पार्टी एक भएपछि विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले एउटै दलको सभामुख र उपसभामुख हुन नहुने भन्दै बिराधे गरिरहे पनि यसको सुनुवाई भएन ।
नियतिको खेल नै भन्नुपर्छ अहिले सभामुख पद खाली छ र सत्तारुढ नेकपाले सभामुखका लागि उपसभामुख तुम्बाहाम्फेलाई राजीनामा गराउने योजना बनाइहेको छ । सत्तारुढ नेकपाले सभामुख आफूसंग राखेर उपसभामुख नेपाली कांग्रेस वा राजपालाई दिने संकेत गरे पनि अहिले राजनीतिक वृत्तमा उपसभामुख तुम्बाहाम्फेलाई नै सभामुख किन नबनाउने भन्ने चर्चा सुरु भएको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने संसदको वितेको यो अवधिमा सभामुखले भन्दा उपसभामुख तुम्बाहाम्फेले संसद उत्कृष्ट किसिमले चलाएको चर्चा छ ।
अहिले नेकपाले सभामुख आफ्नो भागमै राख्न उपसभामुख शिवमायालाई राजीनामा दिन लगाउने योजना बनाएको छ । सभामुखमा सुवाष नेम्वाङ, देव गुरुङ र अग्नी सापकोटाको नाम चर्चामा छ । तर कसैले पनि शिवमायालाई नै सभामुख बनाउनुपर्छ भनेका छैनन् ।
संविधानसले समान सहभागिता सुनिश्चित गरे पनि महिलाका लागि कार्यकारी पद दिन दलहरुले देखाएको कञ्जुस्याई उदेकलाग्दो छ । खासमाा शिवमाया सभामुख बन्न कुनै कोणबाट पनि अयोग्य छैनन् । तर, उत्कृष्ट कार्य गर्दागर्दा उनी आफ्नै पार्टीका नेताहरुबाट पीडित हुनुपर्ने अवस्था छ । संसदको आयु अझै ३ वर्ष बाँकी छ तर महराको राजीनामासंगै सभामुख आफ्नै दलबाट खोजेको नेकपाले उनलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्दैछ । उनलाई राजीनामा दिलाएर सभामुख बनाउनेतिर नेकपाभित्र कुनै बहस चलेको छैन ।
महरा यौन दुव्र्यवहारको अभियोगमा सभामुखबाट पदच्यूत भए पनि शिवमाया आफ्नै पार्टीमा देखिएको पितृसत्तात्मक सोचको शिकार बन्दैछिन् ।
राजनीतिशास्त्रमा पिएचडी गरेकी ५३ वर्षीया तुम्बाहाम्फे एमालेको समानुपातिक कोटाबाट सांसद हुनुभएको हो । तेह्रथुममा जन्मिए पनि मोरङबाट राजनीति गर्दै आउनुभएकी उहाँ २०५२ सालमा अनेरास्ववियुको उपाध्यक्ष र एमालेको नवांै महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको थियो । २०७३ मा केपी ओली सरकारको पालामा इजरायलका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस हुनुभएकी शिवमाया ओली सरकार ढलेपछि राजदूत हुने अवसरबाट वञ्चित हुनुभएको थियो । अहिले सभामुख बन्ने अवसर हुँदाहुँदै उपसभामुखबाटै हात धुनुपर्ने स्थिति उहाँमाथि आइपरेको छ ।
त्यसो त शिवमाया एउटा अडानमा हुनुहुन्छ । पार्टी एक भए पनि भागवण्डामा पूर्व माओवादी र पूर्व एमालेको सन्दर्भ जोडिने हुँदा शिवमायाको हकमा सभामुख हुने त कुरै छाडौं उपसभामुख पद समेत नरहने देखिएको छ । संविधानमा एउटै राजनीतिक दलबाट सभामुख र उपसभामुख बनाउन नपाइने व्यवस्था छ अनुसार पूर्वमाओवादी पक्षधरले सभामुख आफैंलाई चाहिने दाबी गर्दा तुम्बाहाङफेले उपसभामुखबाट राजीनामा त दिनुपर्छ नै, पूर्वएमालेको पृष्ठभूमिबाट आएकाका लागि सभामुख बन्ने ढोका पनि बन्द छ  । त्यसैले आजभोलि उहाँ आफ्ना निकटहरुसंग महराको गल्तीमा मैले किन सजाय पाउने ? भन्दै गुनासो गर्न थाल्नुभएको छ । उहाँको तर्कसँग पूर्वएमालेका केही नेता पनि सहमत छन्  । पार्टी एकीकरण भइसकेकाले अब पनि पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी भनिरहन आवश्यक नभएको उनीहरूको जिकिर छ । त्यसो त नेकपामा पूर्व एमाले समूह तुम्बाहाङफेलाई उपसभामुखबाट राजीनामा गराएर सभामुख नै बनाउने पक्षमा देखिएको छ तर त्यो मत उति बलियो छैन । पार्टी शरीरमा एक भए पनि मनमा एकता नभएको यो प्रकरणले स्पष्टै पारेको छ ।
महिलालाई उच्च नेतृत्वमा पु¥याउने सवालमा सबै दलहरु उत्तिकै उदासिन छन् । वर्तमान सरकारको मन्त्रिमण्डलमा महिला मन्त्रीको संख्या, संसदमा महिला सहभागिता अनि स्थानीय तहमा महिलाको उपस्थिति ‘उप’मा सीमित गरिएको छ । नगरपालिकाको नेतृत्व गर्ने महिलाको संख्या अत्यन्त न्यून छ । यस्तो स्थितिमा सम्पूर्ण रुपमा योग्य रहे पनि शिवमाया तुम्बाहाम्फे सभामुख बन्नु त कता कता भएका उपसभामुख पद समेत धरापमा परेको छ ।
हुन त शिवमाया अहिले नै उपसभामुख पद धरापमा परेको मान्न तयार हुनुहुन्न । उहाँ आफू सभामुखका लागि योग्य र सक्षम रहेको बताउँदै पार्टी नेतृत्वले उचित निर्णय गर्ने अपेक्षामा हुनुहुन्छ तर यो सम्भावना अत्यन्त न्यून छ । किनभने नेकपाका नेताहरुले सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको हुन नहुने भएकाले उपसभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने बताइसकेका छन् । तुम्बाहाम्फेको राजीनामापछि नेकपाबाट सभामुख र अन्य दलबाट उपसभामुख हुने निश्चित छ । नेकपा शिवमायालाई नै सभामुख बनाउँछ भनेर किटानीका साथ भन्न कोही तयार छैनन् । किनभने यो पदमा पूर्व माओवादीको दावी छ । पार्टीभित्र अहिले पनि भागवण्डामा पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीको भन्दै विवाद खडा गर्ने काम भैरहेको छ । यसको शिकार शिवमाया बन्ने पक्का छ ।